कुकुरले गाडी कुदाएर सबैलाई चकित पार्यो…(भिडियो हेर्नुहोस्) – tvNepali.net
कुकुरले गाडी कुदाएर सबैलाई चकित पार्यो…(भिडियो हेर्नुहोस्)
हाम्रो छिमेकी भारतमा अनौठो घटनाहरु हुने गर्दछ । यस्ता यस्ता अनौठा कुराहरु हुने गर्दछ कि सुनादी छक्क परिन्छ यदि त्यहि कुरा देख्नु भयो भने तपाइको होस् उड्नेछ । अहिले यस्तो अनौठो घटना सुन्नमा आएको छ जुन सुनेर पत्याउन पनि गाह्रो पर्दछ ।
भारतको मलायालाम राज्यमा पत्याउँनै नसकिने गरि कुकुरले कार चलाएको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । मानिसले जसरी व्यस्त सडकमा हर्न बजाउँदै कार कुदाएको कुकुरले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । सडकमा कुकुरलाई हेर्न मान्छेको भिडनै लागेको भिडियोले अहिले भारतमा मात्रै नभएर विश्वमा नै चर्चा बटुलीरहेको छ ।
घरपालुवा जनावर कुकुरलाई निक्कै बफादार पशुको रुपमा लिइदै गर्दा भारतको यो कुकुरले कमाल गरेर देखाएपछि कुकुरका मलिक पनि अहिले अन्तरवार्ता दिन र कुकुरको प्रशंसा गर्नमा ब्यस्त छन् ।
PreviousPrevious post:नेपालीहरुको महान् पर्व बडादशैँ आजदेखि शुरु, टिकाको साहित यति बेला….
Next Next post:बैंक बाट निस्केको व्यक्तिको लुट्यो यो बादरले लाखौ रुपैंया
प्रेमको स्पष्ट परिभाषा, आखिर किन हुन्छ प्रेम ? Valentines Day Special
सफल हुन चाहनुहुन्छ भने एक पटक अवश्य हेर्नुहोस् ( भिडियोसहित )
अभिनेता सलमानको फिल्म ‘भारत’को टिजर भयो सार्वजनिक ,इदमा धमाका मच्चाउने उद्देश्य